Kiraro tsy misy vovoka azo alefa ...
Akanjo fitokana-monina azo ariana
Maskara KN95 (Tsy ara-pitsaboana)
Sarontava vita pirinty (Tsy ara-pitsaboana)
Sarontava vovoka vita pirinty
Fitaovana: polypropylene, lamba tsy tenona fiainana talantalana: 2 taona Vokatry ny vokatra: fampiasana miaro amin'ny toeram-pitsaboana Loko: manga, fotsy Fampidirana ny vokatra vita amin'ny polypropylene tsy voatenona amin'ny hoditra, izay notsapaina tamin'ny zavatra manimba. Izy io dia vita amin'ny fingotra maimaim-poana amin'ny lateks misy famolavolana fanangonana avo. Ny fitaovana rehetra dia voasedra mba hahazoana antoka fa ny lalàna avo lenta sy avo lenta dia ambony noho ny fepetra takian'ny lalàna. Ireo fepetra ireo dia misoroka karazana fanehoan-kevitra mahazaka ...
Sarona kiraro-vovoka azo atsipy
Fitaovana: lamba tsy tenona Size: 15x40cm (namboarina) dingana: fanjairana na fizarana famehezana hafanana ultrason Fiainna: 2 taona Vokatry ny vokatra: tazomy ny fidiovana ao anaty sy ny fidiovana Sakany amin'ny fampiharana: indostrian'ny sakafo, indostrian'ny fiarovana ny tontolo iainana, atrikasa fanadiovana, hotely, trano fandraisam-bahiny, sns Loko: Blue Storage: maina, hazavana mihidy ary fitehirizana porofon'ny hafanana fampidirana vokatra Vita amin'ny polypropylene tsy voatenona amin'ny hoditra, izay nosedraina noho ny akora manimba. Vita amin'ny la ...
akanjo azo arovana, tsy mando
Modely: hood iray tsy misy fonony kiraro Famaritana: s, m, l, XL, XXL, XXXL Fampiasana zavatra: ampiasain'ny mpiasan'ny fitsaboana amin'ny toeram-pitsaboana izy io mba hisorohana ny fifindran'ny otrik'aretina avy amin'ny marary mankany amin'ny mpiasa mpitsabo miaraka amin'ny rivotra na ranon-javatra. Fampisehoana vokatra sy firafitry ny firafitra: Ity vokatra ity dia miorina amin'ny tampon'akanjo ambony, pataloha, fehikibo vita amin'ny kofehy ary sary famantarana vozon'akanjo aoriana. Izy io dia vita amin'ny lamba fibre polyethylene avo lenta, izay vita amin'ny firafitra iray vita amin'ny Hooded ary nasiana tombo-kase avy amin'ny rubber ...
Akanjo fandidiana tsy tenona azo alefa
Fitaovana: lamba tsy tenona famaritana: 30g-65g Fomba: fehin-tànana fohy sy pataloha Dingana: fanjairana na fizotry ny famehezana hafanana ultrasonie Fiainna: 2 taona Vokatry ny vokatra: fampiasana miaro amin'ny toeram-pitsaboana Toerana fampiharana: hopitaly, hatsarana, fisorohana ny valanaretina, fizahana kalitao , indostrian'ny simika, sns Loko: manga, mavo, fotsy, sns fitehirizana: maina, hazavana mihidy ary fitehirizana porofon'ny hafanana Fampidirana ny vokatra vita amin'ny polypropylene tsy voatenona amin'ny hoditra, izay nosedraina ...
Fitaovana: lamba tsy tenona famaritana: 30g-65g Fomba: fonosana miverin-doha Fandaharana: fanjairana na fizotry ny famehezana hafanana ultrason Fiainam-pianana: 2 taona Vokatry ny vokatra: fampiasana miaro amin'ny toeram-pitsaboana Toerana fampiharana: hopitaly, hatsaran-tarehy, fisorohana ny valanaretina, fizahana kalitao, simika indostria, sns Loko: manga, mavo, fotsy, sns Storage: maina, hazavana mihidy ary fitehirizana porofo hafanana Fampidirana ny vokatra vita amin'ny polypropylene tsy voatenona amin'ny hoditra, izay notsapaina ho an'ny subs manimba ...
Famaritana: 15.5 * 10.5cm fenitra fanatanterahana: GB 2626-2006 Fanaraha-maso: fitsapana mahafeno fepetra: Fampisehoana vokatra mendrika: PFE ≥ 95%, mahatratra ny haavon'ny kn95. Fahombiazan'ny vokatra: PFE≥95%, mahatratra ny haavon'ny KN95. Fitaovana: lamba tsy tenona 54%, lamba meltblown 24,5%, landihazo mafana 21,5% akora: 54% lamba tsy tenona 24.5% levona notapahina 21.5% landihazo. Validity: 2 taona Product fampisehoana: Ity vokatra ity dia vita amin'ny PP tsy tenona lamba, nandrendrika notsofohana lamba, orona clip, mihantona fehikibo sns. Thro ...
Akora matevina: landihazo 100% Fampisehoana vokatra: Ho an'ny saron-damba tsy mitovy amin'ny olon-dehibe, saron-tarehy famaritana: 5 3/4 ″ L x 3 1/8 ″ H. Fampahalalana fanampiny: Tady azo ahodina, elastika tsy azo arahana amin'ny sofina Namboarina isaky ny tolo-kevitry ny CDC momba ny saron-tava tsy misy fitsaboana. Colors misy: Famokarana vokatra azo ovaina: saron-tava lamba azo ampiasaina, ampiasaina manokana, na kilasy tsy misy fitsaboana, saron-tava contoured. Atolotra amin'ny loko manintona ireo saron-tava landihazo azo ampiasaina ireo ho an'ny fampiasana tsy ara-pahasalamana. Ampiasao ny ...
Haben'ny vokatra: 17.5cm x 9.5cm Fitsapana: Fampisehoana vokatra mendrika: BFE≥95% akora fototra: Ny sosona anatiny sy ivelany dia lamba tsy tenona, ary ny sosona afovoany dia Melt-Blown Non tenona. Manaraka ny fenitra EN14683 (Karazana 1) sy ny Validity an'ny FDA: 2 taona Fampiharana: Natao hanakaiky ny tetezan'ny orona ny sarontava ary manarona ny saokany hanatsarana ny fiarovana. Saron-tava namboarina tamin'ny sosona fibre 3 manify mamela fisefoana ara-dalàna. Ny sarontava amin'ny fandidiana dia natao hanakanana ny vongan-tsiranoka lehibe ...
Akanjo miasa / fitokana-monina SMS
Ny lamba fitafy fandidiana azo alefa dia vita amin'ny lamba maivana sy milamina tsy mifangaro vita amin'ny SMS. Ny fitaovana dia manana ny mampiavaka ny tanjaka avo, ny fahombiazan'ny filtration tsara, tsy misy adhesive, permeability unidirectional air ary anti permeability. Mandritra ny fandidiana, dia afaka manakana amin'ny fomba mahomby ny fanafihana rà mandriaka, virus ary bakteria.
Sarony kiraro fametahana medikaly
Saron-tava fiarovana amin'ny lakaoly faneriterena, ampiasaina amin'ny fiarovana, mety amin'ny seranam-piaramanidina, gara, lalamby haingam-pandeha haingam-pandeha, fiantsonan'ny metro, toeram-pitsaboana, ozinina sns.
Saron-kiraro fitokana-monina fiarovana
Saron-kiraro fitokana-monina fiarovana, ampiasaina amin'ny fiarovana, mety amin'ny seranam-piara-manidina, gara, haingam-pandeha haingam-pandeha, gara ambanivohitra, toeram-pitsaboana, ozinina sns